2022 Xaalada Warshada Hudheelka
Location: Bogga ugu weyn » Warshadaha Warshadaha » 2022 Xaalada Warshada Hudheelka
23 min akhris
Sida ugu badan ee 2020 ay ahayd sanad biyo-biyood ah warshadaha hudheelka, sidoo kale 2021. Iyadoo masiibada sii socoto, warshaduhu waxay bilaabeen inay dib u soo baxaan, oo ay kiciyeen qaybinta tallaalka qaranka iyo rajada macaamiisha. Ururka Hudheelada iyo Hoyga Maraykanka ee ugu horreeya warbixinta warshadaha Hudheelka, oo la sii daayay Jannaayo 2022, ayaa muujisay sida ay u adkeysan tahay warshadaha huteelka oo ay saadaaliyaan waxa ka horreeya mulkiilayaasha hudheellada iyo hawl-wadeennada, shaqaalaha, iyo socotada.
Hal sano ka dib, tallaalada ayaa diyaar u ah qof kasta oo ku nool Maraykanka da'da shan iyo ka weyn, iyo 63% dadweynaha Maraykanka si buuxda ayaa loo tallaalay.
Haddana kiisasku way sii kordhayaan, sida laga walaaco noocyada fayraska cusub iyo dillaaca.
Xaqiiqdu waxay tahay in COVID-19 uu sii wado inuu saameyn ku yeesho nolol maalmeedka - iyo wada noolaanshahan wadajirka ah ayaa noqon doona caadada mustaqbalka la filayo. Fayrasku waxa uu hoosta ka xarriiqayaa saamaynta ay yeelan doonto sanadkan warbixinta Warshadaha Hudheelada, oo ay ka mid yihiin
Saadaasha isbeddellada dhaqaale ee sare iyo sidoo kale isbeddellada la filayo ee macaamilka iyo dareenka ganacsiga
Marxaladda xigta ee soo kabashada waxay noqon doontaa mid aan sinnayn, oo laga yaabo inay kacsan tahay. Laakiin hal shay ayaa weli la hubaa: 2022 waa sanadka socotada "cusub".
Safarka raaxaysiga-yacni, isku darka ganacsiga iyo safarka madadaalada-ayaa qarxay intii lagu jiray aafada, taasoo ka dhigan isbeddel qoto dheer oo ku yimid dabeecadaha macaamiisha iyo dabeecadaha la xidhiidha safarka. Tani, dhankeeda, waxay si weyn u saameyn doontaa hawlaha hoteelka marka ay warshaduhu ka jawaabaan si ay u daboolaan baahiyaha iyo filashooyinka martidooda.
Dhammaan calaamadaha ayaa ah in warshadaha hoteelku ay sii wadi doonaan inay u dhaqaaqaan soo kabashada 2022, laakiin soo kabashada buuxda ayaa weli dhowr sano ka harsan tahay. Sida laga soo xigtay
Falanqaynta AHLA ee Oxford Economics, baahida qolka hoteelka iyo dakhliga qolka ayaa la saadaaliyay inay ku dhawaad ​​​​ku soo laabanayaan heerarka 2019 gudaha
Dakhliga qolka ayaa la saadaalinayaa inuu gaaro $168 bilyan, gudaha 1% ee tirooyinka 2019 iyo
korodhka 19% marka loo eego 2021. Degganaanshaha ayaa la saadaalinayaa inuu gaadho 63.4%, ku dhawaad ​​66.0% heerka la gaadhay 2019 aadna uga sareeya 44% iyo 57.6% ee la gaarey 2020 iyo 2021, siday u kala horreeyaan.
Soo celinta dakhliga qolalka ayaa hubaal ah inay tahay war soo dhawayn ah oo loogu talagalay hudheelleyda, haddana way soo dhawaynaysaa
ha sheegin sheekada oo dhan.
Xataa marka lagu soo noqdo waxqabadka dakhliga qolka masiibada ka hor, tirooyinkani kuma xisaabtamayaan qiyaasta dheeraadka ah ee lagu qiyaasay in ka badan $48 bilyan5 kharashaadka ka hor masiibada ee cuntada iyo cabitaanka, goobta shirarka, iyo adeegyada kale ee kaaba — isha dakhli ee la filayo inay si weyn u dhacdo. soo noqoshadeeda. Khubarada warshaduhu waxay qorsheeyaan in wax ka yar kala badh shirarka iyo dhacdooyinka ay soo laaban doonaan 2022, 6 iyada oo saamaynta xun ee kala duwanaanshaha Omicron wali la go'aamin doono.
Intaa waxaa dheer, huteelada dalka oo dhan waxay sii wadaan inay qodaan laga bilaabo muddo laba sano ah halkaas oo ay ku waayeen $111.8 bilyan oo dakhli ah oo soo gala qolka oo keliya.7 Soo kabashada qayb ahaan ee 2022 kuma filna in ay u oggolaato hudheellada inay si buuxda u bixiyaan amaah-bixiyeyaasha, oo si buuxda dib loogu shaqaaleysiiyo shaqaalaha, maalgashadaan hagaajinta hantida dib u dhac, oo dib u buuxi kaydadka lacagta caddaanka ah ee ganacsiga.
Waxaa weli jira dabaylo madaxeed oo xooggan iyo carqaladayn kara si ay si buuxda u soo kabsato. In kasta oo safarka wakhtiga firaaqada uu si buuxda u soo laaban doono 2022, socdaalka ganacsigu waxa la saadaalinayaa inuu aad uga hooseeyo heerarkii hore ee masiibada. Darnaanta saamaynta muddada-gaaban ee Omicron ee warshadaha huteelka ayaan weli caddayn.
Waxaa intaa dheer, kala duwanaanshiyaha mustaqbalka waxay abuuri doonaan isbeddel ku yimaada soo noqoshada wakhtiga firaaqada iyo safarka ganacsiga iyo tobanaan balaayiin doolar oo ku xiran shirarka iyo kharashka dhacdooyinka. Marka loo eego Warbixinta Aragtida Ganacsiga Kooxda ee Cvent ee Noofambar 2021, rubuc-meelood meel shirarka la soo ururiyay waa isku-dhafan, iyo 72% qorshayayaasha shirarka la sahamiyay ayaa ka keenaya dhacdooyin leh qayb shaqsi ah.
Hudheeladu waxay sii wadi doonaan inay la halgamaan yaraanta shaqaalaha, iyagoo yaraynaya awoodda ay u leeyihiin inay sare u qaadaan dakhliga ka soo gala dadka safarka ah. Cadaadiska sicir-bararka micnaheedu waa in kasta oo soo kabashada magaca ah ay dhici karto goor hore, soo kabashada dhabta ah ee warshaduhu waxay qaadan doontaa ilaa 2025, sida laga soo xigtay STR iyo Dhaqaalaha Dalxiiska.
In kasta oo ka soo kabashada dhabta ah ee heerarkii hore ee masiibada ay weli ka maqan tahay dhowr sano, in ka badan in hoteellada ay fahmaan, u diyaargaroobaan, oo ay ka jawaabaan baahiyaha socotada "cusub", mustaqbalka iftiimaya wuxuu u muuqdaa mid u muuqda warshad muhiim u ah Maraykanka dhaqaalaha.
Saadaasha safarka ee 2022 si wanaagsan ayay u socotaa, laakiin way socotaa
isbedel ayaa la filayaa, iyadoo ay ka hadhsan yihiin sannado ka soo kabasho buuxda. Heerarka deganaanshaha
iyo dakhliga qolka waxaa la saadaalinayaa inuu ku dhawaado heerarka 2019 ee 2022, laakiin
Saadaasha dakhliga kaabaya ayaa ah rajo yar. Safar ganacsi ayaa la filayaa
in ka badan 20% in ka badan sanadka, kaliya 58% ee
shirarka iyo dhacdooyinka ayaa la filayaa inay soo noqdaan, iyo saamaynta taban oo buuxda
Omicron weli lama yaqaan. Dabaylaha shaqadu waxay ka dhigan tahay heerarka shaqada
dhamaadka sanadka ayaa hoos u dhici doona 7% marka loo eego 2019.
Socotada "cusub" waxay ka filayaan waxyaabo ka duwan noocyada hoteelada. Macaamiisha
dhiirigelinta, dhaqamada, iyo filashooyinka dhamaantood way is beddeleen intii lagu jiray aafada -
si qoto dheer u bedelaya sida hoteeladu u shaqeeyaan si ay u qanciyaan martidooda, kuwaas oo ah
waxay u badan tahay inay noqdaan kuwo wakhti firaaqo ah ama dalxiisayaal ah ama reer guuraa dhijitaal ah. Sida
natiijadii, tignoolajiyadu aad bay muhiim ugu noqon doontaa guusha hantida.
Haysashada iyo soo jiidashada kartida sare waxay la macno tahay soo bandhigida wadooyinka shaqada,
ma aha oo kaliya shaqooyinka. Hudheeladu waxay dhisi karaan xoog shaqaale mustaqbalka
gudbinta ballaca fursadaha shaqo ee laga heli karo gudaha
warshadaha ilaa hadda iyo shaqaalaha mustaqbalka.
Qorshayaasha joogtaynta ayaa door muhiim ah oo sii kordheysa ka ciyaari doona
warshadaha. Hudheelada ballan qaadaya yoolalka waaridda iyo
Barnaamijyadu kaliya maaha kuwo qanciya rajada martida, ee waxay samaynayaan
isbeddellada u wanaagsan ganacsiga sidoo kale.
Barnaamijyada daacadnimada waxay u kobcin doonaan jawaab celinta muuqaalka cusub ee safarka.
Iyada oo hoos u socota ganacsiga mugga sare, barnaamijyada daacadnimada dhaqameed ee no
dheer macno samee. Barnaamijyada daacadnimada ugu waxtarka badan ayaa bixin doona wax badan
abaal-marinno gaar ah oo buuxiya baahiyaha safarrada ganacsiga ee marmar
iyo safarrada firaaqada sidoo kale.
U DIYAARINTA SAFARADA SI TOOSA LEH, LAAKIIN AYAA FIICAN
Isbedbeddelka safarka ee waagii faafa ayaa saadaasha u diyaargarowga safarka ka dhigaya mid aad muhiim u ah - welina ka sii adag - sidii hore. Dadku ma rabaan inay safraan? Ma qorshahooda safarka waxa lagu dhimi doonaa xaqiiqooyin dhaqaale oo ballaadhan? Xayiraadaha safarka ee guriga ama meesha ay u socdaan miyay ku qasbi doonaan inay beddelaan qorshahooda?
Si fudud u dhig, u diyaargarowga socdaalku waxa uu tilmaamayaa sida ay dadku diyaar ugu yihiin in ay safar galaan. Si aan u fahamno u diyaar-garowga safarka maanta, waxaan u leexannay Tusmada U-diyaargarowga Safarka Accenture, hab cusub oo lagu qiimeeyo ujeedka safarka oo ku habboon xaqiiqooyinka muuqaalka safarka ee maanta. Tusaha bilaha ah, ee wadamo badan ayaa raadraaca safarka iyo tilmaamayaasha aan safarka ahayn ee saameeya ujeedada oo ay ku jiraan COVID-19 heerka caafimaadka dalka ee la xiriira, arrimaha dhaqaalaha muddada-gaaban, baahida safarka, iyo heerka dhaqdhaqaaqa. Tilmaamayaashan waxaa loo miisaamay si ay uga tarjumaan xajmiga saameynta ay ku leeyihiin diyaargarowga safarka.
U diyaargarowgu waa Bartilmaameed Dhaqdhaqaaqa
Tusmada waxaa la cusbooneysiiyaa bishiiba mar sababtoo ah u diyaargarowga safarka ma ahan mid dhammaystiran. Tani waxay ahaan doontaa run ilaa iyo inta aan masiibada si buuxda loo xakameyn oo mowjadaha cusub, kala duwanaanshaha, iyo jawaabaha dawladda iyo caafimaadka dadweynaha ay si joogto ah dib ugu soo celinayaan kalsoonida dadka iyo kalsoonida safarka. Tusaale ahaan, ka fiirso sida degdega ah ee xayiraadaha safarka loogu dhejiyay wadamada adduunka markii ay soo baxday kala duwanaanshaha Omicron dabayaaqadii 2021. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa u aqoonsaday kala duwanaanshiyaha walaaca Noofembar 26, 2021, iyo Diseembar 2, 2021, Madaxweynaha Biden wuxuu ku dhawaaqay borotokoollada cusub ee socdaalka caalamiga ah.
Isbeddellada u-diyaargarowga safarka ee qeybta labaad ee 2021 ayaa wax barasho ah waxa la sameynayo
filo sanadka 2022: xawli ku socda jeebabka oo ay weheliso joogsi iyo bilow ay sababto
hal ama ka badan tilmaamayaasha safarka.
Sawirka Caalamiga ah
Baahida la joojiyay iyo dad badan oo door biday inay la baxaan ama ku noqdaan nolol maalmeedka iyaga oo fayraska ka mid ah, u diyaargarowga safarka wuxuu arkay 5% booday Sebtembar 2021 marka la barbar dhigo Ogosto 2021 adduunka oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, isbeddellada diyaargarowga ayaa ahaa kuwo aan degganayn dhammaadka sannadka. Noofambar 2021 waxa la kulmay hoos u dhac 2% ah bishii hore sababo la xidhiidha cudurro dillaacay iyo xannibaado socdaal oo cusub. Guud ahaan diyaargarowga gudaha
Noofambar 2021 ayaa 23% ka hooseeyay saldhigga 2019.
Bishii Sebtembar 2021, suuqa Mareykanka wuxuu arkay hoos u dhac 3% ah Ogosto 2021 sababtoo ah xannibaado adag oo saaran socdaalka caalamiga ah. Gaadiidka diyaaradda iyo deggenaanshaha hoteelku waxay raaceen hannaanka taariikhiga ah, iyagoo dhacay ka dib xagaaga aad u xooggan oo muujinaya xoogga dayrta. Baadhitaano ay sameeyeen Maamulka Amniga Gaadiidka (TSA) ayaa gaadhay bishii Luulyo in ka badan 2 milyan oo rakaab ah, hudheeladuna waxa ay gaadheen 71%.
Bishii Nofembar, fududaynta xannibaadaha safarka Yurub ee Mareykanka ayaa horseeday koror weyn oo ku yimid awoodda duulimaadka, taasoo tuseysa baahida kor u kaca.
12 Dalku waxa uu sii waday in uu furmo safarkii markii fasaxa la gaadhay. Runtii, usbuuca Thanksgiving-ka 2021 wuxuu ahaa rikoor jabiyay huteelada Mareykanka—heerarka deggenaanshiyaha waxay ahaayeen 53%, RevPAR-na wuxuu 20% ka sarreeyay isla muddadaas 2019.
Faafida Caalamiga ah ee Saamaynta Maxaliga ah
Ma aha oo kaliya u diyaarsanaanta socotada gudaha in warshadaha huteelada ay tahay in ay ku xisaabtamaan darawalka baahida 2022. Socdaalayaasha caalamiga ah sidoo kale waa daawadayaasha muhiimka ah.
Socdaalayaasha caalamiga ah waxay xisaabiyeen 15% wadarta kharashka safarka Mareykanka ee 2019 ka hor inta uusan aafo bilaaban, laakiin kaliya 6% sanadka 2020.15 2022, Golaha Socdaalka & Dalxiiska Adduunka ayaa saadaaliyay 228% kharashka ku baxa Mareykanka ee socdaalka caalamiga ah marka la barbar dhigo 2021.
U diyaargarowga kor u kaca suurtagalka ah waxay ka dhigan tahay in la qiro in dareenka ku saabsan safarka iyo u diyaargarowga safarka ay ku kala duwanaan doonaan waddan ilaa waddan sababtoo ah dhibaatadan caalamiga ah ayaa si weyn loo xaddiday saameynteeda. Hudheelada ka fikira u-diyaargarowga muraayada waxa ay dadku soo mareen waaya-aragnimada aafada faafa - iyo hadda - ayaa sida ugu wanaagsan loo meeleeyay si loo go'aamiyo haddii ay u baahan yihiin inay soo bandhigaan tillaabooyin caafimaad iyo badbaado oo dheeri ah si ay rafcaan uga qaataan socotada.
Waa kan waxa indexku ka muujinayo u diyaar-garowga safarka waxa la filayo inay u noqdaan suuqyada gudaha ee Maraykanka.
Hubanti la'aanta ka hartay dabeecadda kala duwanaanshaha Omicron wakhtiga daabacaadda waxay soo jeedinaysaa sida ay u adag tahay in la saadaaliyo diyaargarowga safarka ee 2022. Waxa aan u qaadan karno waa in xayiraadaha la soo rogay si loola dagaallamo kala duwanaanshaha Omicron ay u badan tahay inay sii jiraan ilaa Maarso. Intaa waxaa dheer, dhowr arrimood oo waqti-gaaban ah ayaa awood u leh inay saameyn ku yeeshaan diyaargarowga safarka si togan ama si xun, iyo guud ahaan, ma fileyno in Tusaha uu muujiyo calaamadaha soo kabashada joogtada ah ilaa bartamaha 2022 ugu horreyn.
ARAGTIDA CUSBITAALKA 2022
U diyaargarowga safarka ayaa ku wargalin doona sida warshadaha huteelku uga shaqeeyaan meelaha muhiimka ah oo ay ku jiraan degitaanka, dakhliga qolka, shaqada, iyo rabitaanka cuntada ee macaamiisha. Iyadoo 2022 aysan arki doonin soo laabasho buuxda 2019, aragtida ayaa ka xoog badan sidii ay ahayd 2021.
Deganaanshaha huteelada ayaa la filayaa inay ka sii socoto kor u kaca hoos u dhaca taariikhiga ah ee 2020, celcelis ahaan 63.4% sanadka, marka loo eego STR iyo Dhaqaalaha Dalxiiska.
Sannadka 2019, ku dhawaad ​​60,000 huteel ee dalka ayaa la kulmay celcelis ahaan deganaanshaha hoteel sanadlaha ah 66%, iibinta 1.3 bilyan qol. Faafida ayaa ka dhigtay degenaanshaha huteelada Mareykanka hoos u dhac taariikhi ah oo ah 24.5% bishii Abriil 2020, degenaanshaha sanadlaha ah ayaa hoos u dhacay 44% sanadka. Degenaanshaha huteelka ee 2021 waxa lagu qiyaasay ku dhawaad ​​58% - shan dhibcood oo buuxa ayaa ka sarreeya sidii la saadaaliyay wakhtigan sanadkii hore (52.5% saadaasha), laakiin wali waxay hoos uga dhacday in ka badan boqolkiiba sideed dhibcood heerarka faafitaanka.
Halka qaar ka mid ah huteelada adeegga buuxa ay bilaabaan inay shaqeeyaan xitaa iyagoo 50% deggan, tani kuma xisaabtamayso deynta amaahda guryaha iyo kharashyada kale. Sidan oo kale, inta badan huteelada ayaa labadii sano ee la soo dhaafay si aad ah uga hooseeyay heerkii nasashada, iyaga oo ku tiirsan kaydka si ay u dabooshaan kharashaadka. Markaa xitaa ku soo laabashada meelaha u dhow deggenaanshaha cudurka faafa ee 2022, hudheeladu waxay leeyihiin dariiq ay u maraan ka hor soo kabashada runta ah. Heerarka deganaanshaha ayaa la saadaaliyay inay sii socdaan kor u kaca sanadka 2022, celcelis ahaan 63.4% sanadka.
Jaantuska 1 - Deganaanshaha Qolka Hudheelka Sannad kasta
Ka dib markii uu hoos u dhacay ku dhawaad ​​50% sanadka 2020, dakhliga qolka huteelka waxa uu ku dhawaan doonaa in uu ku soo laabto
2019 heerarka sanadkan. Kharashaadka kaabaya ee aan qolka ahayn waxay sii ahaan doontaa dib u dhac.
Kahor masiibada, warshadaha huteelada ee 5.4 milyan qolalka martida ah waxay soo saareen in ka badan $169 bilyan dakhliga qolka sanadlaha ah, taas oo aan ku jirin tobanaan balaayiin dheeri ah oo ay soo saartay kiraynta qolalka shirarka iyo ilo kale oo dakhli oo dheeri ah.
Sannadkii 2020, dakhliga qolka huteelada ayaa hoos u dhacay ku dhawaad ​​50% guud ahaan Maraykanka ilaa $85.7 bilyan oo kaliya, ka dibna waxa uu noqday $141.6 bilyan sanadka 2021. Tani waxay ka dhigan tahay in labadaas sano, huteeladu ay lumiyeen dakhli dhan $111.8 bilyan oo doolar oo dakhliga qolka kali ah. Dakhliga qolka ayaa la saadaalinayaa inuu gaaro $168.4 bilyan sanadkan, ama boqolkiiba hal dhibic ee heerarka 2019.
Saadaasha dakhliga kaabaya ee shirarka, dhacdooyinka, iyo cuntada iyo cabbitaannada - oo lagu qiyaaso $48 bilyan sannadkii ka hor masiibada - waa mid cad. Mashaariicda Knowland oo kaliya 58.3% shirarka iyo dhacdooyinka ayaa soo laaban doona 2022, iyadoo 86.9% ay dib ugu laabanayaan 2023, taasoo la macno ah in inta badan dakhligaas uu sii maqnaan doono.
Jaantuska 2 – Dakhliga Qolka Hudheelka Sannadkii
Dhamaadka 2022, hoteelada ayaa la filayaa inay shaqaaleysiiyaan 2.19 milyan oo qof - 93%
heerarkooda cudurka faafa ka hor.
Sanadka 2019, huteelada Mareykanka waxaa si toos ah uga shaqeeya in ka badan 2.3 milyan oo qof. Kadib hoos u dhaca weyn ee 2020, hoteeladu waxay dhammeeyeen 2021 77% heerarkooda shaqo ee 2019.
In kasta oo kobac xooggan la filayo sannadka soo socda, hudheellada ayaa la saadaalinayaa inay dhammaanayaan 2022 oo ay ku jiraan 2.19 milyan oo shaqaale ah - hoos u dhac ku yimid 166,000 ama 7% marka la barbar dhigo 2019, taasoo ka tarjumaysa dabaylaha madaxa ee suuqa shaqada.
Jaantuska 3 - Shaqaalaynta sanadka
Waxaa jira baahi loo qabo safarka-gaar ahaan socotada da'da yar.
Ka dib bilo karantiil iyo xannibaado socdaal oo horaantiisii ​​faafay, dad badan oo Maraykan ah ayaa xiisaynaya inay mar kale safraan 2021; Dalabkaas ayaa la filayaa inuu sii socdo sanadkan. Marka loo eego Warbixinta Gobolka Safarka iyo Martigelinta Subaxda ee Q4, 64% dadka waaweyn ee Mareykanka waxay sheegeen inay safreen sanadkii la soo dhaafay, iyadoo macaamiil da'yar iyo kuwo dakhligoodu sarreeyo ay hormuud u yihiin.
Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in 50-da waddan ee la sahamiyay, dadka Mareykanka ah ay ka mid yihiin kuwa aadka u xiisaynaya inay waddada maraan, iyadoo XNUMX% ay filayaan inay safar nasasho ah ku galaan lixda bilood ee soo socota.
Marka loo eego Accenture's 2021 US Holiday Shopping Survey, 40% macaamiisha Maraykanku waxay qorsheynayaan inay diiradda saaraan badbaadinta fasaxa ama safarka mustaqbalka. Badbaadinta safarka waa macaamiisha labaad ee mudnaanta maaliyadeed ee ugu muhiimsan ka dib bixinta deynta (Jaantus
43% buuxa waxay filayaan inay socdaalaan in ka badan ama ka badan lixda bilood ee soo socota marka loo eego isla muddada lixda bilood ah ee 2019.
Jaantuska 4 – 5ta Muhiimadood ee Maaliyadeed ee Macaamiisha Maraykanka ee ugu sarreeya 2022
Gen Z iyo Millennials-ka ayaa si gaar ah u xiisaynaya inay mar kale safraan, in kasta oo ay wali u baahan yihiin dammaanad si ay sidaas u sameeyaan. Seddex-meelood meel kooxdan waxay aaminsan yihiin in macluumaadka wakhtiga ku habboon, maaraynta socodka socodka socdaalka ee wanaagsan, iyo awoodda loo leeyahay in lagu ballansado oo lagu xaqiijiyo heerka tallaalka iyada oo loo marayo apps-ka shirkadda socdaalku ay ku qancin doonto inay mar kale safraan.
Wax badan oo ku saabsan: Accenture | Thanksgiving | Covid-19 | Ururka | shaqada | Maamulka Amniga Gaadiidka | Millennials | Airline | Martigelinta | Dalxiiska | Caafimaadka | Ururka Caafimaadka Adduunka | United States | Hotel | Safarka ganacsiga | Business | Dib u eegid
Daawaynta Cusub ee Isku-dhafka ah ee Dhibaatooyinka Ka-hortagga Sonkorowga ee Cornea Caafimaadka|
Soo dhawaynta iyo Dalxiiska Ardayda ayaa ka faa'iidaysanaya deeqaha waxbarasho ee cusub Martigelinta, Hotel, Dalxiiska|
Warbixin Cusub Oo Daaha Ka Qaaday Aragtiyo Layaab Leh Oo Ku Saabsan Jimicsiga Iyo Gabowga Covid-19, Caafimaadka|
Tirada Rakaabka Madaarka Caalamiga ah ee Ontaariyo ayaa dhaaftay heerarkii hore ee masiibada Covid-19|
Daawaynta La Soo Bandhigay Horraantii Kansarka Naasaha Daawaynta Waxay Bixisaa Rajo United States|
Accenture Airline Business Safarka ganacsiga Covid-19 shaqada Caafimaadka Martigelinta Hotel Millennials Ururka Dib u eegid Thanksgiving Dalxiiska Maamulka Amniga Gaadiidka United States Ururka Caafimaadka Adduunka